သောကြာ သားသမီးများအတွက် မတ်လတစ်လစာ အထူဟောစာတမ်း – Alanzayar
သောကြာ သားသမီးများအတွက် မတ်လတစ်လစာ အထူဟောစာတမ်း
ရပ်တန်နေသော မိမိလုပ်ငန်း စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ များ ပြန်လည်အသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာအံ့။(၁၈)ရက်မှ (၂၅)ရက်နေ့ ထိ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများတွင် အနည်းငယ်စိတ်ထွေပြားမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်၍ မိမိတို့၏လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘေးပ ယောဂ အနှောင့်အယှက် တချို့ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ငွေ၊ကား၊ခြံ၊အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ အရေးကြီးသောစာချူပ်စာတမ်း အထူးသတိပြုပါ။အပျောက်အရှာနဲ့ အဆုံး၊အခိုးခံရမှု၊ ဖောက်ထွင်းခံရမှုများ ကြုံတွေ့နိုင်၏။
စီးပွာရေး စားသောက်ကုန်ရောင်းချခြင်း၊အုတ်၊အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊အုန်းဆီ၊အုန်းသီး၊အိမ်အလှဆင်လုပ်ငန်း၊အိမ်ငှားလုပ်ငန်း၊ဥယျာဥ်ခြံလုပ်ငန်း၊ထီ၊ဖိနပ်၊အထည်အလိပ်၊ လောင်းစာဆီ၊ဓာတ်ဆီ၊ရေနံဆီ၊ဒီဇယ်၊ဓာတ်ငွေ့၊လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ရေအောက်၊မြေအောက် သတ္တုရှာဖွေ့ရေး၊တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ..အစစရှိသော အကျိူးဖြစ်ထွန်းနည်း။ကုန်သည်ကြီးများအတွက် အကျိူးမြတ်ရအံ့။
ပညာရေး– လူငယ်၊လူရွယ်အပေါင်း ယခုနှစ်တွင် အသက်ဝမ်းကြောင်းပညာရေးနှင့် အ ခြေခံပညာရပ်ကို အလေးအနက်ထား မဖြစ်မနေ သင်ကြားရပါလိမ့်မည်။သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ် အကျိူးခံစားရမှုရှိမည်။ ကျန်းမာရေး အထွေးအထူးမရှိ.. အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး..ပျိူရွယ်သူများ ဖူးစာရှင်အသစ်နှင့်တွေ့ပြိး စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းများရှိမည်။ချစ်သူဟောင်းရှိသူများ ပြန်လည်တွေ့ဆုံရမည်။ အိမ်ထောင်ပြုရတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် မိမိထက် အသက်ကြီးသူနှင့် ဆုံးဆည်းရတတ်သည်။သားသမီးကံကောင်း၍ လိမ္မာရေးခြားရှိမည်။အထူးသဖြင့် သောကြာသားသမီးများ စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးတွေ့ မှ ၂.၁၁.၂၀.၂၉ ရက် ၊၆.၁၅.၂၄ရက် နှင့် အသက် ၁၁နှစ်၊၁၄နှစ်၊၂၀နှစ်၊ ၂၃နှစ်၊၂၆နှစ်၊၂၇နှစ်၊ ၃၈နှစ်၊၄၇နှစ်၊ ၅ဝနှစ်၊ ၅၆နှစ်တွေ့က..အထူးအညံ၏။ကိုယ်၊စိတ်၊နှုတ်သုံးပါး အကျဉ်းအကြပ်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း၊ ထိခိုက်ရှနာဖြစ်ခြင်းများကိုကြိုတင်သိရှိထားသင့်ကြပေသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာအဖိုးတန်များထွက်ခြင်း၊ အုပ်စုအတူနေများနှင့် အဆင်မပြေခြင်း၊ဂုဏ်သိက္ခာများကျခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်၏။ငွေကြေးကိစ္စအတွက် မကြာခဏအမုန်းခံ၍ ပြောဆိုပေးရတတသည်။ ဘဝတစ်သက် မကြုံဖူး ရုံရောက်၊ဂါတ်ရောက်၊ အမှုကိစ္စကြုံတွေုရတတ်သလို့ လယ်မြေ၊အိမ်ခြံ မြေ အရူပ်အရှင်းပြဿနာကြံတွေ့ရတတ်၏။ရန်သူလော၊မိတ်ဆွေလော၊ဝေခွဲရခက်နေတတ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့် လူမှုရေးနဲ့ပက်သက်လျှင် အထူးသတိပြုပါ။ မယုံသင့်ပေ။
ရည်စားရှိသူများ ကာလကြာသည့်အခါ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲမှုများ ကြုံရကိန်းရှိသည်။လက်ထပ်ဖို့ plan ရှိသော်လည်း မိမိ ချစ်သူဘက်က အ တွေးထဲ တောင်မရှိဖြစ် နေတတ်ပြိး ကိုယ် မျော်လင့်ထားသူ မဟုတ်ဘဲ တခြားသူနဲ့ မ မျှော်လင့်ပဲ အိမ် ထောင်ကျတတ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ရတတ်၏။အိမ် ထောင် ရေး မိသားစုကို အကွက်ချပြီး သွေးခွဲဖို့ လုပ် နေတဲ့သူ တွေရှိမည်။
အထူးအဟော– ၂၀၂၂–ခု မတ်လ (၁၅)ရက်တွင်း ရှင်ပြု၊နားသ စလွယ်တင် မဂ်လာအခါရ၍ ဝိဝါဟလက်မဂ်လာနှင့်အိမ်ဆောက်၊အိမ်တတ် ရှောင်ကြဥ်ပါ။၂၀၂၂–ခု မတ်လ (၇)”(၁၃)”(၁၄) ရက်တွေ့ ရှင်ပြု၊နားသ စလွယ်တင် နက္ခတ်မရှိ ရှောင်ကြဥ်ပါ။ တနလျာ၊ကွာသပတေးသားသမီးမြားကို အထူးသတိထားသငျ့ ထိုနနေံသားသမီးတှေ့က မိမိတို့ဘဝကို ပကြျစီးခွငျး ကွုံတှေ့ရတတတျသညျ့မို့ သတိထားပါ။ဆောငျရှကျစရာကိစ်စ – ယခုလတှေ့မှ ခရီးသှားခွငျး နှငျ့ လုပျငနျးကိစ်စဂဏ်ဍမြားအဆငျပွရေနျအတှကျ အစိမျးရောငျရှိသော ကြောကျမကြျရတနာ ဝတျဆငျပါ။
အကျိူးပေးနေနံ – စနေ၊တနဂ်နွေ၊အဂ်ါ. အကြိူးမပေးနနေံ – တနလျာ၊ကွာသပတေး. အကျိူးပေးအရပ် – မြောက်. အကျိူးမပေးအရပ် – တောင် ကံကောင်းစေသောအရောင် – နို့နှစ်၊အနီ၊အဖြူ၊စိမ်းနုရောင်. အကျိူးပေးဂဏန်း – ၇.၁.၃.၆.
ယတြာ – နံနက် (၆း၁၁)အချိန်တွင် ဘုရားတွင် သောကြာ ထောင့်၌ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်တိုင်(၉)တိုင်၊ အမွှေးတိုင်(၁၁)တိုင် အောင်သပြေပန်း (၂၁)ညွန့် ကပ်လှူ ဂြိုလ်ဘုရား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပြိး ရေချမ်းစင်များ၌ ရေ ဖြည့်ပါ။ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ပုတီးစိပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ crd
Previous Article စနေသားသမီးများအတွက် မတ်လတစ်လစာ အထူဟောစာတမ်း
Next Article ပုပ္ပါးတောင်အကြောင်းသိကောင်းစရာ